﻿6Employee Management Tips For SMEs ﻿
အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲရေး အကြံပြုချက် (၆) ချက်
အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ နေ့စဉ်စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခက်အခဲများအကြားကနေပြီး အောင်မြင်မှုများကိုရရှိ၍ နေရာတစ်ခုတွင် ရပ်တည်လာနိုင်ဖို့အတွက် လုပ်ငန်းရှင်များဘက်မှ များစွာကြိုးစားအားထုတ်ထားကြရပါလိမ့်မယ်။
SME များအတွက် အရေးအကြီးဆုံးကတော့ မိမိတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းများကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်း (Employee Management) ကောင်းမွန်ဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယနေ့ဆောင်းပါးလေးအနေနဲ့ SME များအတွက် ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ကတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။
၁။ ဝန်ထမ်းများ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အချိတ်အဆက်မိနေပါစေ - တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအချိတ်အဆက်ရှိရှိဖြင့် အရေးကြီးကိစ္စများကို သိရှိနိုင်သည့် (informed workforce) တစ်ခုအဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်းဟာ Employee Engagement နှင့် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေးကို အကောင်းဆုံးမြှင့်တင်နိုင်စေဖို့အတွက် အရေးပါတဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အချက်အလက်များကိုပိုမိုသိရှိထားတဲ့ ဝန်ထမ်းများဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်လို့ပါပဲ။ သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ အရေးမပါတဲ့ အရာကိစ္စလေးများကိုတောင်မှ ဝန်ထမ်းများကို ပေးမသိခြင်းဟာ ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ သင့်လုပ်ငန်းနဲ့ အစိမ်းသက်သက်ဖြစ်နေစေမှာကလွဲပြီး အခြားမည်သို့သောအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုကိုမှ ရရှိနိုင်မှာမဟုတ်လို့ပါပဲ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်တော့ လုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများ အောင်မြင်မှုများ၊ ကျရှုံးမှုများ အစရှိသည်တို့ကို ပုံမှန်အသိပေးမှုများပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိသင့်တယ်လို့ ခံစားလာရစေမှာဖြစ်ပြီး သင့်လုပ်ငန်းရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက် စိတ်ပါလက်ပါကြိုးစားလာမှုများရှိလာစေမှာဖြစ်ကာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၂။ သင့်ဝန်ထမ်းများကို Micromanage မပြုလုပ်ပါနဲ့ - Micromanager ဆိုသည်မှာ လိုအပ်သည်ထက်ပိုတဲ့ စောင့်ကြည့်မှုများကိုပြုလုပ်တတ်တဲ့ သူဌေး (သို့) မန်နေဂျာတစ်ဦးကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ Micromanage ပြုလုပ်သူတစ်ဦးဟာ ဝန်ထမ်းများကို ဘယ်အလုပ်တွေကိုတော့ ဘယ်အချိန်မှာ ပြီးစီးအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို အသိပေးပြောကြားသည့်အစား ဝန်ထမ်းများရဲ့ လုပ်ပုံကိုင်ပုံများကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပြီး ထိုဝန်ထမ်း (သို့) ဝန်ထမ်းများရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပေါ် တောက်လျှောက်/ မကြာခဏ ဝေဖန်မှုများပြုလုပ်နေတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဟာ ထိုသို့သောလူတစ်ဦးဖြစ်နေပါသလား? သင့်အနေနဲ့ များစွာကြိုးစားပြီးမှ ဒီလိုနေရာကိုရောက်ရှိလာတဲ့အတွက် လိုအပ်ချက်များကို သင်အမြဲတွေ့မြင်နေပြီး ပြောဆိုနေတတ်တဲ့ ဒီအကျင့်ကိုဖျောက်ဖျက်ပစ်ဖို့ခက်ခဲလှတယ်ဆိုတာကို နားလည်ပေမယ့်လည်း သင့်အနေနဲ့ လိုအပ်တဲ့ မိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်မှုတွေ/ ချိန်ညှိမှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးဖို့တော့ လိုအပ်နေပါပြီ။
ဝန်ထမ်းများကို Micromanage ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အသုံးမကျဘူး၊ ယုံကြည်ခြင်းမခံရဘူး၊ လိုအပ်သည်ထက်ပိုပြီး မှီခိုနေရတယ် (ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်များကို မပြုလုပ်နိုင်ဘူး) အစရှိသည့် စိတ်ခံစားချက်များရှိလာနိုင်စေပြီး တစ်ချို့သောကိစ္စရပ်များတွင် ရန်လိုလာခြင်း၊ မပျော်မရွှင်ဖြစ်လာခြင်းတို့ကိုပါ တွေ့ကြုံလာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ခေါ်ယူဌားရမ်းထားတဲ့ နေရာတစ်ခုအတွက် ပြုလုပ်ရမည့်အလုပ်အား သင်ခေါ်ယူထားသည့်ဝန်ထမ်းများက လုပ်ကိုင်နိုင်တယ်လို့ အပြည့်အဝယုံကြည်ထားကြောင်း ပြသပေးခြင်းဟာ သူတို့ရဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအား တိုးတက်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ မှန်ကန်စွာ ကိုက်ညီမှုရှိသူများကို ဌားရမ်းခေါ်ယူပါ၊ ရှင်းလင်းတဲ့ ရည်မှန်းချက်များကို ချမှတ်ပါ၊ အောင်မြင်မှုများကို တိုင်းတာနိုင်မည့် စာရင်းဇယားများပြုလုပ်ပါ၊ တာဝန်ခံမှု တာဝန်ယူမှုအဆင့်ဆင့်ကို ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပါ၊ နောက်ပြီး အလုပ်တာဝန်များခိုင်းစေရာတွင် ထိရောက်စွာခိုင်းစေခြင်းတို့ဟာ Micromanagement ပြုလုပ်နေမည့်အစား ပြုလုပ်သင့်တဲ့ သင့်လျှော်တဲ့ Employee Management ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ဘက်မလိုက်ပါနဲ့ (သို့) ဘက်လိုက်ခြင်းကို အားမပေးပါနဲ့ - ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးအပေါ် အထူးတလည်ဆက်ဆံနေခြင်း (တနည်းအားဖြင့်) အထူးအခွင့်အရေးများပေးနေခြင်းဟာ မိမိရဲ့အလုပ်အပေါ် ဆိုးကျိုးများသက်ရောက်လာစေနိုင်တယ်ဆိုတာကို သင်သိပါသလား? SME များတွင် ဝန်ထမ်းများဟာ အစုအဝေးလိုက်အလုပ်လုပ်တတ်ကြပြီး ဒီအချက်ကြောင့်လည်း မန်နေဂျာများနှင့် ဝန်ထမ်းများ (သို့) ဝန်ထမ်းများအချင်းချင်း ရင်းနှီးမှုရရှိစေဖို့ လွယ်ကူလှပါတယ်။ ဒီအခါမှာ မန်နေဂျာများ (သို့) လုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဟာ သူ့ရဲ့အလုပ်မှာ အခြားသောဝန်ထမ်းများထက် တော်လွန်းနေတဲ့အတွက် ဦးစားပေးဆက်ဆံခြင်းမျိုးကို ပြုလုပ်လာလေ့ရှိတတ်ကြပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့် အခွင့်အရေးများကို ညီမျှစွာခွဲဝေခြင်းမရှိတော့တဲ့အခါတွင် ဆုံးဖြတ်မှုများဟာ ဝေဝါးလာနိုင်ပြီး “ဦးစားပေးခံရတဲ့” ဝန်ထမ်းမှ အများစုကို ရရှိသွားခြင်းမျိုး ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒီအရာက မကြေမချမ်းဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်တက်ကြွမှုမရှိခြင်း၊ Motivation ပျောက်ဆုံးခြင်းတို့ကို အခြားသောဝန်ထမ်းများအကြားတွင် ဖြစ်လာစေနိုင်တဲ့အတွက် သင့်အနေနဲ့ ဆုပေးခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းများကို အကဲဖြတ်ခြင်းတို့အတွက် တရားမျှတမှုရှိပြီး ပွင့်လင်းတဲ့စနစ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၄။ ကတိတည်ပါ - သင့်ရဲ့ Employee Compensation သို့ Benefits Structure တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခြင်းမပြုလုပ်မှီတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေများအားလုံးကိုစဉ်းစား၍ သင့်လျှော်တဲ့ ကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုများကို ပြုလုပ်ဖို့ဟာ အရေးကြီးလှပါတယ်။ လကုန်ချိန်ရောက်တော့မှ လစာငွေနောက်ကျနေခြင်းများကို ဝန်ထမ်းများဖက်မှ လိုလားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ လစာငွေပေးဖို့နောက်ကျခြင်းဟာ ဝန်ထမ်းများရဲ့ အလုပ်တွင်တည်မြဲမှုနှုန်းကို အမြန်ဆုံးလျှော့ချနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒီအရာက SME များအတွက် ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
သင့်ဝန်ထမ်းများရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်လိုက်၍ ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့လစာငွေများကိုသာ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ထုတ်ဖော်ပြောကြား၍ ကမ်းလှမ်းမှုများကိုပြုလုပ်ပါ။ သင်မတည်နိုင်မယ့် ကတိများကို မပေးပါနဲ့။ ဒါဟာ အားလုံးကိုပျော်ရွှင်စေနိုင်ဖို့အတွက် အသေချာဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
၅။ သူတို့ရဲ့ တိုးတက်မှုအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုရှိကြောင်းပြသပါ - သင့်ဝန်ထမ်းများအနေဲ့ သူတို့ရဲ့ အသိပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို မြှင့်တင်နိုင်ဖို့ အမြဲရှာကြံနေခြင်းအား အားပေးဖို့အရေးကြီးလှပါတယ်။ သို့သော် သူတို့ကို အားပေးရုံမျှဖြင့် မရပ်တန့်လိုက်ပါနဲ့ - ပုံမှန် internal training/ learning session များကိုလည်း စီစဉ်ထားပါ။
လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးထားခြင်းခံရသည့် Workforce ကို ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းဟာ နှစ်ဖက်စလုံးအတွက် အကျိုးရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ အလုပ်များကို ပို၍ ထိထိရောက်ရောက်ပြုလုပ်လာနိုင်ကြမှာဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနေနဲ့လည်း အကောင်းဆုံး ROI ကို ပြန်လည်ရရှိလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၆။ အကျိုးခံစားခွင့်များထားရှိပေးဖို့ကိုလည် သတိရပါ - သူတို့ရဲ့ လစဉ် လစာငွေများအပြင် ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ သင့်ဘက်က ဘယ်လိုမျိုးအကျိုးခံစားခွင့်များကို ပေးအပ်နိုင်သလဲဆိုတာကိုလည်း သိရှိလိုကြပါသေးတယ်။ သင့်ဝန်ထမ်းများအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်များကို Offer ပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ဟာ အရေးကြီးလှပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒါဟာသင့်အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ယျေဘူယျဘဝနေထိုင်မှုအပြင် သူတို့ရဲ့ အနာဂါတ်ပေါ်ပါ invest ပြုလုပ်ပေးနိုင်ကြောင်း ပြသနိုင်လို့ပါပဲ။ ကောင်းမွန်တဲ့ Employee Benefits Package တစ်ခုဟာ အရည်အချင်းရှိသူများကို ဆွဲဆောင်နိုင်စေပြီး သင့်ရဲ့အလုပ်တွင် တည်မြဲနေစေဖို့အတွက် အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချက်အပြင် အကျိုးခံစားခွင့်များ ထားရှိပေးထားခြင်းဟာ သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းကို အပြိုင်အဆိုင်လုပ်ငန်းများမှ ကွဲထွက်၍ တစ်မူထူးခြားလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ထမ်းများဟာ လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် အကြီးမားဆုံးအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် SME လုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ talent များကို ရရှိနိုင်စေဖို့အပြင် ထိုသူများကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ကိုလည်း အထူးအာရုံစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို talent များကပဲ သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ အောင်မြင်မှုကို အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။